Xa u-Ermakov noMas baqhekeza, wamemeza unyaka. Yonke imihla wayedlalela kwifowuni: "Andiyifumani indoda yam nangayiphi indlela. Kwaye, wonke umntu uyaba nokusondela. Volodya, uncedo! "Kwaye ngokwenene! Ayikho isimemezelo kwiphephandaba ukunika-edume lonke ilizwe, uMas Rasin ukhangele iqabane lomntu. Ndiyakhumbula, ndamcebisa ngelithi: "Yaye ugqoke ijaji ephosiweyo, upende ubuso bakho ngopende, njengokungathi ungumdwebi. Ngoko uza kujonga ukuba uthanda uMas Rasinin ... "Intombi yokuqala kaMay Rasputina yayingumfana oyisibonelo, kodwa kungekudala into eyenzekayo phakathi kobudlelwane babo.
Kwaye nangona ndathi ndaqala iveli kumacala, ndaqhubeka ndicinga ngo-Masha: "Ngoko uya kuthandana!" Kuninzi kuyo yonke iminyaka yobomi bam ndiye ndayifumana ukwabelana konke okulungileyo noMasha, owayedla ukutya into enomnandi - Ndiza kuphakamisa: "Hamba, zama!"
Ndacinga ukuba, ndacinga ukuba ndingamnceda njani, kwaye ngokukhawuleza ndamkhumbula ngomntu oshishino endiyayaziyo, uViktor Zakharov ... Ngenye imini i-khatsti yase-Masha ePortugal yayiye "ezimbini zaseRashiya" ezimbini ngeendikiti ezinkulu zeentyatyambo. Kuye kwavela ukuba abashishini be-Ukhta beli xesha ngeli shishini e-United States. Xa beva malunga nokusebenza komculi wabo ozithandayo, bavela eMelika baya eMadra. Amafomu oMatshini wokuKwakha asishiye amakhadi abo oshishino. Ngenye inye ifowuni kaVictor.
Ngelinye igama, wafumana ikhadi lakhe loshishino waza wathi: "Ndiyaphule noMasha. Ngoku uhlala yedwa. Ufuna umhlobo ... "UViktor wagijima waya eMoscow ngelokuqala lokuqala. Kodwa emva kwexesha elifutshane waxabana no-Masha.
Uyandibiza kwakhona ngezinyembezi: "Oo, yintoni enokuyenza? UVictor washiya. Ndifumane, nceda! "Ngokuqhelekileyo, ndakhawuleza ukukhangela. Kodwa uVictor waqala ukukhalaza ngendalo yakhe engathandabuzekiyo: "Ukuba wayengenguMash Rasputina, ndiza kuthetha naye ngokugqithiseleyo! "Kwakudingeka ukuba uchaze ukuba uMas wayengumculi, ukuba kufuneka enze ngendlela eyahlukileyo kunye naye, kungekho ngendlela efanayo nomfazi oqhelekileyo. Ekugqibeleni, inkwenkwezi! Kodwa mbulela intombi yokuqala kaMas Rasputina, waba ngu-Olympian eyahlukileyo.
Mhlawumbi kwakuyiphutha lam ... ndiphakamisa lo mphakamo kuMas, ukuze akwazi ukuthetha nabani na onyawo olulinganayo. Indoda efana nam, iya kumnika yonke into ngaphandle kokulandelelana, kunzima ukuyifumana ... Ndenze into yonke kuye, ngaphandle kokuba andizange ndiphume kwinqanaba. Uhlabelela phambi kwabaphulaphuli, kwaye ehostlwini akukho mntu uxolisa ukuba omnye "uMasas Rasputin" usemva kwesiqendu aze ahlabe kunye naye amazwi engoma ...
- Kuvela, wena, njengomntu, wayesazi kwaye uyayiqonda le ntokazi.
"Sasihlangene malunga neminyaka elishumi elinesixhenxe. Yaye oku, kufuneka uvume, ininzi ...
Xa beqala ukudibana, u-Alla Ageyeva - nguloo Masha - yintombazana elula evela kwidolophana eyi-Urop. Ndiyesaba le ndawo, ilahlekelwe kwi-taiga yaseSiberia engenammiselo, ayikho kwimaphu.
Emva kokuba imbongi uLeonid Derbenev, obhala amazwi kaMasha "ndazalelwa eSiberia," yathi: "Kunzima ukufika apho ama-Masha evela khona, kwaye akunakwenzeka ukuba avele apho aze ahlale eMoscow!" Ndiyakhumbula kunye noMas wenza amakhonsathi eKemerovo, kwiNdlu yeZiko leMidlalo, kwaye wayefuna undibonise kwidolophana yakhe. Sahlala e-posh Lincoln kwaye saqala uhambo. Kuzo zindlela zingadluli, kwaye akudluli, kwaye thina "eLincoln" siye. Ewe, inkwenkwezi yendawo! Xa i-asphalt iphelile, kunye nelizwe laqala indlela, yonke imingxuma, imoto yethu yaqhutyelwa kwi trektara kwaye yaqhutyelwa kunye nama-bumps. Ngenxa yoko, itrektara yethu inamathele edakeni. Kwaye iikhilomitha ezimbini kwafuneka ziqhube ngeenyawo ukuya kwidolophana.
Yaye ijikeleze ubuhle obuhle! I-taiga engapheliyo! Kwi-hillock ephezulu, kwibhantshi lomlambo kunezindlu ezininzi. Eyesithandathu okanye ezisixhenxe ... Ngendlela, ezi zindlu, ezinqunywe kwii-oki zeeminyaka eminyaka ubudala, zineminyaka eyikhulu ubudala. Kwaye akukho nto, bema! Kuphela emhlabathini abashiye, kangangokuthi iifestile nje emhlabeni zenziwa. Bonke abantu abahlala kwidolophana babulawa nguMas Rasin. Ewe, kunye nemoto engaqhelekanga eyayilindele endleleni ...
U-Masha wangibonisa indlu ayezalelwe kuyo. Indlu enekhamera kunye negumbi elikhulu. I-oven yaseRashiya, kwiifestile kwiipateni zegeranium, ekhoneni lomfanekiso. Sazisa abamelwane beendwendwe zedolophu: i-sausages, ushizi ...
UMasha undixelele ukuba yena, onyana omncinci, unyanzelekile ukuba adle iihagu. Wawunqumla imisila yeengulube ezigubhayo, ukuze banganyatheli umyezo. Ngamanye amaxesha ndaya kwi-taiga ngaphesheya komlambo kwaye apho, ndilele ngotshani obunzima, ndiphupha ukuba ndikhule kwaye ndibe ... ukumkanikazi waseSpain! Yaye yabona iMoscow kuphela kwibhokisi yee-chocolates, ezazisusa kuloo mzi.
Ndamfundisa ukuba aphile ngendlela eyahlukileyo, ngendlela entsha, kwaye ube nobudlelwane obuqhelekileyo kunye nentombi yokuqala kaMas Rasputina. Njengomdwebi, ekhishwe kwizinto endizifumanayo, inkwenkwezi. Ukuqala, u-Alla kwi-brunette yajika yaba yintlanzi: iinwele ezimnyama zazibukeka zibuhlungu ngenxa yobuhle baseSiberia. Emva koko kwabonakala kum: kwakudingeka ukuba agqoke i-bangs ukumboza ubuso bakhe. Emva koko waguqula umlo weentloko zakhe. Ngokombono wam, kwakukho isiphoso esincinane ebusweni buka-Alla: umgama ukusuka ekhaleni ukuya kumlomo ophezulu awuzange ufinyelele kumgangatho. Kwaye ndamcebisa: "Udinga ukumomotheka lonke ixesha. Thumela kwiindlebe - ihashe lakho! Khumbula! "Okulandelayo - umfanekiso. Andiyi kuthetha ukuba wayesehla, kodwa ukulahlekelwa iipounds ezimbalwa azizange zenzakalise. Wayenomzimba omncinci. Ndambonisa iimvavanyo ezazinokulungisa lo mpazamo. Nsuku zonke wayebandakanyeka kwi-gymnastics ngeyure, kwaye kanye ngeveki wagijima ejikeleze iIzmailovsky Park.
Kwafuneka ndibe ngumbini wakhe wokupaka, kunye nomenzi wezandla, kunye nomntu owenzayo. Ndazilinganisa iinyawo zakhe ngecentimeter. Babenomzimba obuhle kakhulu, kodwa inxalenye engaphantsi yonyawo ibonakala ifutshane. Kwaye, ngokuchanekileyo ukuya kwi-millimeter, kubalwa ubude besiketi se-Masha kunye nokubandakanya oblique kumacala awo. Kwaye iisentimitha ezilishumi elinesine isithende saba yikhadi lakhe lebhizinisi. Ndikholelwe, oku kukho ubugcisa bonke! Kuhle gqitha ukubonisa umlenze, indlela yokunikela ngesandla, indlela yokumamatheka ngexesha ...
Ndamfundisa uMasha ngokuchanekileyo, atye, agqoke, ahambe, ahambe ngokugqithiseleyo emotweni. Kwaye, ke, bhucula! Ukutshintsha isigxina sezwi lakhe, kwafuneka ndisebenze nzima. Ngasekupheleni kwee-1980 ii-Masha ziza kucula i-"Rasputin" yegama lakhe, ngenxa yoko ndamfundisa into enzima kakhulu ebizwa ngokuthi "ukwahlukana kweempahla".
"Kuphela ibali likaPygmalion neGalatea yakhe!"
- Kunokwenzeka kwaye ngoko kuthetha. Kwandithatha iminyaka eyisibhozo yonke ukuguqula u-Alla Ageyev, ecula ngelizwi elincinci, engazi igama lomculo, kwi-famous Ras Rasin ...
... Ibali lam kunye noMash Rasputina, ngokukhawuleza, laqala nge-prom prom. Ndangena ngezemfundo kwaye ndingacingi ngomculo. Ngomnye kumdaniso ndaqaphela ukuba onke amantombazana, njengeenyosi, ajikeleza kwinqanaba apho umfana ophethe isiginci wayecula: "Ndiyisele i-birch sap ehlathini lasempumalanga ..." Ndinee-biceps, i-triceps, kwaye ngokohlobo oluthile lwe-hilak! "Hayi, - ndicinga, - kuvela, nantoni na amantombazana ayamthanda!" Inkwenkwe yayicula, yaqhuma
ukususela kwinqanaba kwaye wayeza kuhamba, njengoko ndambamba ihlombe lakhe: "Ndiyabonise, ndibonise phi na ukubetha apha." Wabonisa iintlobo ezimbalwa. Kwaye konke oko! Ubusuku bonke, ndahlala e-attic, ndahlalutya ingoma. Ejikeleze i-cookie yamanzi, kwaye mna, ndihlamba iminwe egazini, ndihlala negitare. Ukususela kuloo mzuzu, uthando lwam umculo lwaluqalile, oluye lwasitshintsha ngokusisigxina i-destiny kwaye ludibanisa noMas ...
- Ufumene phi lo mqondiso waseSiberia?
- Kwi-factory knitting "iDawn Dawn", e kufuphi nesikhululo se-metro "Semenovskaya" ...
Ngelo xesha ndasebenza kakhulu eMzantsi ngeendibano zeengqungquthela, kodwa kufike ixesha xa ndagqiba kwelokuba ndise eMoscow ndize ndidale iqela lam. Umbuzo waphakama: phi ukuhlaziya? Omnye ucebisa ukuba athole umsebenzi kule feshini. Ndavumelene ngokuvakalayo ukukhokela isangqa somculo ixesha eliqingatha. Emva koko, into eyona nto yayikukufumana izitshixo kwiholo yebandla! Ebudeni bemini, mna kunye nabafana baxoxwa apho, kwaye ngokuhlwa ndafundisa izixhobo zokudlala isiginci ngabaphefumli kunye nabasuki. Amantombazana ajabulise.
Ngolunye usuku, ndabetha isiqhwithi esichukumisayo kwisiqwenga esincinci sababhinqa abaselula! Emva koko iimbono zethu kunye nomnini-mgca wadibana. Kukho ikhefu. Andizange ndifumane into engcono yokubuza: "Ntombazana, kodwa awuyi kucula?" Wabuya wamkela, kodwa abahlobo bakhe bamqhubela phambili. Wayithatha imakrofoni waza wandila into elula. Le yintlanganiso yethu yokuqala kunye neenkwenkwezi zePas Rasputina zakusasa ...
U-Masha wathi uhamba esuka kwidolophana yakhe waya edolophini elincinane ebizwa ngeBolovo. Wayegqiba ekubeni afundele umdwebi. Kodwa ke wawaphonononga kwaye wahamba, njengomzala wakhe uFrosya Burlakova, ukuba anqobe iMoscow kunye nesisithikithi enye. Iimviwo, uthe, akazange aphumelele kwisiko lonyango. Kwafuneka ndifumane umsebenzi njengomfundi. Kwakukho umda owavumela amawaka amantombazana afana naye ukuba ahlale eMoscow. Ngelinye igama, waba "i-limitchitsey."
Andiyi kuthetha ukuba uAlla wayebuhle, kodwa kuye kwavela iphunga elimnandi kunye nokunyaniseka oko kwaqondakala ngokukhawuleza - le ntombazana ivela eSiberia. I-neive kakhulu, eneentetho ezivumiweyo, ezivulekileyo, ezichanekileyo. Ngandlela-thile, efuna ukubonisa ulwazi lwakhe lomculo, wandibuza ngokubalulekayo: "Ngaba unayo i-phaser?" Ngokubhekiselele kwi-feyser - i-pedal esetyenziswa ngabagitare. Ngokucacileyo wayevile ngale nto kumdaniso kwiqela, apho agijima nabahlobo bakhe, ngoko wandixelela. Emva koko uMashinho unqwenela ukubonakala ngathi ungobuchule onomculo kum ngathintela kakhulu ...
Wadonsa lonke ulwazi lwakhe kwiifilimu. Kwinkampani yefektri babephala ngonaphakade kwi-cinema yaseNdiya, bazisa "Woza uthethe" kunye no-Alla Pugacheva. Wagijima malunga neshumi ukuza kumjonga. U-Pugacheva wayengomfanekiso we-Masha!
Xa sathetha intliziyo ngentliziyo yokuqala nentombi yokuqala kaMasta Rasina noAlla. U-Alla uthe uvela eSiberia waya eMoscow, uhlala apha ezintandathu ezintandathu sele sele sele ehlala. Wacacisa ukuba kunzima kangakanani enye i-ruble engamashumi amathandathu, uhlala kwindawo yokulala kwigumbi elinamantombazana amathathu. "Uphi na?" - ndiyabuza. "KuPhezulu lesine," u-Alla waphendula. "Wow, yinto engafanelekanga! - ndamangaliswa. - Kwaye ndilapha kwiPesiti yesiBini. Abavakalisi, kuvela. "
Xa sidibana no-Alla kwiqela. Uphantse ukhale. Apha, bathi, wathola kwangaphambili kwaye ... yonke imali isetyenzisiwe. Kwaye ixesha elide sele likhona. Kuvela ukuba andinakuyichasa, ndathenga iibhotile ezintathu zekholethi kunye nenkukhu kwaye nditya yonke into. Wayesoloko elambile. Ukutya into yaseSiberia, iqhawe! Ngokukhawuleza uya kuchitha yonke yakhe umvuzo, aze agijimele ukuboleka imali kwiintombi. Kuphela ityala liya kunika-kwaye kwakhona umntu olambileyo uhleli, u-paw uyamcela. "Intloko yam iyajikeleza rhoqo, kwaye isisu sam buhlungu!" - wakhala. Ndabuhlungu gqitha ukuba ndandicinga ngokukhawuleza .- "Woza undwendwendwe. Umama uya kupheka into. "
Ngobusuku sadibana nesitishi se-metro "Semenovskaya". U-Alla wangena kwengubo enqabileyo, apho ayevela eSiberia. Umama ekudleni wayicinezele i-cutlet yintsapho yonke. Ndibeka ipayipi yokucoca kwitheyibhile, apho iziqhekeza ezisibhozo zazibhema, kwaye ngenxa yezizathu ezithile zashiya ekhishini isikhashana.
Ndibuya - kwaye epanini yodwa i-cutlets ezimbini. Bangalindile. Ewe, unokwenza ntoni? Ulambile, njengoko besithi, akayiyokazikazi! Uninzi lwazo zonke, u-Alla wayemthandayo, ewe ke, ama-dumplings. Ayinakuyidla isitya esinye. Ekuhambeni kwexesha, ngokuqinisekileyo, wafunda ukulawula ukutya kwakhe ... Mama, ndiyakhumbula, wamangaliswa yile ndlela yokuzibandakanya kwam esitsha, kodwa ndachazela yonke into kuye. Ukususela ngoko, ndaqala ukumondla rhoqo.
- Masha ngaphambi kokuba ube ngabaqeqeshi?
"Wayeneminyaka elinesibhozo kuphela." Mncinci kakhulu. Ewe, intombazana eyaziwayo, abaninzi bazama ukumnceda, kodwa ngenxa yokuba wayekhuliswe, wonke umntu wahamba. Wayezinyamekela umyeni wakhe.
Oku kwakungaphambi kokuba sidibane. Indoda ethile evela eBlov Emva kokuba evela eSiberia waya eMoscow, wafumana uthando lwakhe lwangaphambili waza wamema umhla. U-Alla, malunga nantoni na, engaxolisi, weza kwintombazana ekamelweni le hotele. Kwaye waqala ukumhlupha. Kwaye kuyimfuneko kuye, ehlwempuzekileyo, ukumelana ngokukhawuleza kwaye ubaleke, amshiye engenanto.
EMoscow, uAlla, abahlobo beentombi ezinamava bajikela kwiidansi ngeCawa. Ngamanye amaxesha inkosikazi yamema amantombazana ekutyela. Wayephindaphinda kwamanye amabali, ngamanye amaxesha kwakudingeka alwe. Wayengenangqondo kangangokuthi wayengenakuze acinge ukuba kwakudingeka "ukuhlawula" ukunyangwa. Ngenye imini u-Alla wabaleka kwindawo yokutyela, egxuma ewindow. Ndiyabulela uThixo, yayingumgangatho wokuqala ...
U-Alla wayevame ukuza kuthiwa. Asinayo nayiphi inveli nonke. Amanqaku ambalwa awakhanga, yikho konke. Kwaye ndaya kwishishini ukuya ngasemzantsi. Emva kwexesha uyandibiza. Kwaye ngokukhawuleza ngezinyembezi: "Vov, cinga nje, ndidlulile, kwaye ndaxothwa ngenxa yomsebenzi. Ukususela kwihostele baxosha. Andikho ndawo. Yintoni endiyenze ukuba ndiyenze? "Kubonakala ukuba, abahlobo bakhe bamcebisa: bathi, uMuscovite, unobhala, akukho nto yokulahleka! Ndacinga ndacinga ndaza ndagqiba: "Yiya kumama. Uya kuhlala nathi de ndihambe. Emva koko siya kufumana into ethile. " Ndamnxeba umama. Ewe, wayenemibuzo. Kodwa ndiseneminyaka engamashumi amathathu anine ubudala, indoda emele. Ndathi kumama: U-Alla uya kucula kwi-ensemble yethu, ngelizwi, engekho ngaphandle ...
Ndibuyela emva kweeveki ezimbini, u-Alla usele nathi. Ngobusuku yonke intsapho yayidla isidlo sakusihlwa. Ukususela ngaloo mini, baqala ukuhlala bevuya ngokulandela. Ndiya kuphi na? Uthande izaqathe!
- Ngaba uchaze omnye nomnye ngothando?
- Asizange sithethe nantoni na. Yonke into yenzeke ngokwemvelo. Emva koko, inyaniso yokuba wanquma ukuza kunye nam, kunye nenyaniso yokuba ndiyivumelekile, isusa ityala kwibudlelwane ...
Ewe, u-Alla wafika kum: umdlali, umculi, akayaphuzi, akabheki, kwaye umntu unokwethenjelwa, ngaphandle kobudenge. Yintoni enye? Wayefuna ihlombe apho wayencike khona, kwaye ndammisa.
Ihostela sasinomncinci, iigumbi ezimbini. Abazali bahlala kwindawo engamashumi amabini anamitha, kwaye sihlala kwisakhiwo samitha ezintandathu. Kulo gumbi kwakukho isafa esityayo kunye nepiyano.
Ngomama, uAlla akazange abe nolwalamano kanye. U-Alla ungumntu okhaliphile, kunye noSiberia ngokuthe tye, kwaye umama, ummi waseMuscovite, wakhathazeka kwizinto ezininzi. Kodwa ukuba ingquzulwano yayiphuza, ayizange ifinyelele kwisigcaziso: Mna okanye utata wayesoloko ezama ukuphazamisa. Ngendlela, eplasini, u-Alla wayeyinkosi enkulu, wenza umyalelo wokukhawulezisa ngejubane. Wahlamba iingubo zakhe zangaphantsi: umatshini wokuhlamba kwindawo yokugezela encinane ayengenakunyulwa. Ngokwemvelo, njengabantwana bokwenyaniso, wayesebenzisa ubuchule ngokukhahlela. Kodwa ngokuqinisekileyo umama wayepheka, u-Alla wayedlala ngaphezulu.
Xa waba yinkwenkwezi, kwaye wayenompheme omkhulu wengubo - ezinye iingubo ezingama-50! - lalawulwa nalo lonke uqoqosho oluphezulu. Ndandisoloko ndiyincoma: "Unayo iitalente ezimbini - ukucula nokucoca!" Waqokelela iifotukethi zakhe, akazange avumele umntu ukuba aye kule nkqubo. Inkosi yayikuzo zonke izinto! Kodwa kungekudala wayedinga ukubonisa le talente. Eyona nto, sahamba ngeekonsathi, siphila eehotele, sasiyidla, ngokuqinisekileyo, kwiivenkile ...
"Wadibana njani nabazali bakhe?"
"Baye basityelela iintsuku ezimbalwa. Baye balungiselelwa ubusuku ebumbini labazali. Abane babo kunye nookhokho bam belele ebhedeni.
Bona, ngokwemvelo , bonke babenomdla: bobabini i-Red Square, kunye ne-metro, kunye nefilimu ethi "vidik", ebendibonise emva kokuhlwa kwesidlo. Abazali bakaMas bahlanganiselwa ukuba bathuthele eUkraine, ngoko baye bema ngentombi. Umntu ongenasiphelo wayengumama wakhe! Wayekhathazekile ngeendawo ezitshintshayo - lonke ixesha elifudukayo ukusuka kwisixeko ukuya kwisixeko ... eSiberia yayibanda, eKheboksary, apho ahlala khona, nabo, abazange bahlale ixesha elide: "Into endiyithandiyo abamelwane!" Kwaye, eKamenka. Uyise kaMastile wayemthobela kuyo yonke indawo umfazi wakhe.
U-Nikolay Ageyev wayeyinyaniso yaseSiberia, wasebenza njengombane. Ngenye imini ingozi yenzeke emsebenzini - wayephantsi kwengcinezelo kwaye waphulukana ngezandla zombini. Masha wayengumntwana xa uyise ekhubazekile. Wandixelela ukuba wayedla ngokuloba kunye nobawo. Wamnceda ukuba abeke isibungu kwi-hook aze ashenxiswe kuye intlanzi ebanjwe. Kwakhona wayeyinkosi enkulu yokucoca iintlanzi.
Umama, ngokombono wam, wakhulela kwikhaya lezintandane. Intombazana eneminyaka ezisibhozo ubudala yayikhethwe ngabadlali beesksi "i-rubber", kuba yayimangalisa ukuguquguquka, kwaye yabonakala kwiprogram e-Igor Kio. Emva koko, ngenxa yokulimala kwangemva, kwafuneka ahambe esekisini. Washiya kunye neqela lezemihlaba ukuze asebenze eSiberia. Apho wadibana naye uthando - u-Nikolai Ageyev.
Intsapho yahlala kwipesheni yomntwana, kunye nomama wayesebenza. U-Masha unomntakwabo omncinane, uKolya. Wandixelela ukuba wayemkhohlise njani ebuntwaneni bakhe.
Umama uya kuthengela i-halva kubantwana, kwaye uAlla Kolya uyamoyika: "Khangela, ungadli le nto! Ubebe ukhawule. " Wayekholelwa, wamkholelwa, kwaye yonke into edibeneyo yaya kudade okhulile. UKolia wayikhumbula kancinane oku kuye: "Undenzele!", Wahleka ngokuphendula wathi: "Musa ukukholwa mna, uyisiyatha!" UKolya waya eMoscow xa uAlla eba Masha Rasputina, kwaye wayefuna ukucula. Kodwa akazange aphumelele. Ndamenza abe ngutitshala kuthi. Ngoku usebenza njengomqambi wamatye kwi-metro ...
Unyaka awuzange udlule njengoko u-Alla evuma ukuba siya kuba nomntwana. "Kuqala ... Ndifuna ukuba uqale ukucula ... kunjalo, yenza njengoko uyazi," wamxelela waza washiya ishishini eSochi. Asizange sisayine. Iminyaka eyisibhozo iye yahlala umtshato womtshato. Kwa yihlobo. Masha wahlala nam. Ndiyakhumbula, ndaya kwinqanawa, kunye nesisu sami esivele sichazwe, ndaphefumula umoya wolwandle. Kwaye xa kwakufuneka ukuba azalwe, wathi: "Ndiya kumama, e-Ukraine."
"Uyithini intombi yakho?"
- UMasha wambiza emva komama wakhe - uLida. Ndakuphikisana nokubiza umntwana ngokuhlonipha enye yamalungu entsapho, bathi - into embi. Kodwa uMas wagxininisa. Intombi yam yayiphila eUkraine ixesha elide: ehlobo kukho ukufudumala, izithelo, iivithamini. Xa sasihamba no-Masha Lida ukutyelela. Intombi yam yayiyiminyaka nesiqingatha. Ndikhangele, umama-mkhwe wamvumela yonke into, iyancoma yonke into. ULida unqonkcoza uyise omkhulu entloko ngentsimbi yomthi, kwaye akukho namnye oya kubeka ingxelo! Ucela i-candy, ngokukhawuleza: "Yidla, ngokukhawuleza!" Andikwazanga ukuzibamba ndaza ndathi: "ULydia Georgievna, kutheni uphathisa umntwana kangaka? Akunakwenzeka ukuba amthobele kuyo yonke into! "Kwaye kwagqitywa! Ilizwi ngelizwi, saxabana. Ndaphenduka ndaya ephumayo: "Ukuba kunjalo, ndaya ekhaya!" Masha yonke iinyembezi zikhawuleza emva kwam: "Andifuni kuhlala apha, ndikunye!" Sasishiya. Kwaye emva kwexesha bathatha uLida eMoscow ...
Kwaye kuyimfuneko yokwenza indawo: kwigumbi lethu elincinane phakathi kwesofa kunye nepayiliyali yanyanzelela ibhokhwe. Kwaye uMas waya kubomi besifazane abaqhelekileyo: umyeni wakhe, umntwana, ipane ... Ngaba unokucinga ukuba ubuqaqawuli kunye noPugacheva ngokwakhe uya kukhawuleza ngokukhawuleza?
"Kutheni ungasayina?" U-Masha akazange acacise, bathi, batshata?
- Ngaba ukuzalwa komntwana akuyiyo into? Kwakungekho nanye ixesha. Kwaye akazange agxininise. Ndandisoloko ndihlala eSochi kwishishini. Kwaye kwaqala ukufundisa umculo. Ndiza kuzizisa kwi piyano kwaye ndibonise: "Ezi zizitshixo. I-White ithoni, abamnyama yi-semitone. Zama. " Wa ndi thobela. Ngokukhawuleza ndaqonda: into endiyithethayo kuye, kufuneka ndiyenze!
U-Masha wangilandela yonke indawo. Ewe, wayefuna ukubona ilizwe kunye nokuqhuba esiteji. Thina kunye nilungiselele ingoma enye kwi-repertoire ye-Pugacheva, yena kunye naye kwaye wenza nathi kwiivenkile ...
- Wagqiba nini ukugqiba umtshato?
- ULida wayesele minyaka emashumi asibhozo ubudala, kwaye sonke sasihlala singacwecwe. Ekugqibeleni, uMas wamenywa emthendelekweni waseJamani, kwaye waya ngaphandle, ndandifuna isitampu kwipaspoti yam. Ngomhla omnye, sayina. U-Masha waba ngu-Alla Ermakova. Kwaye emva kweminyaka elishumi, ngenxa yokuba wayeziwayo namapolisa aphakamileyo, wathola incwadi entsha, apho yabhalwa kumnyama nomhlophe - uMaria Rasputina. Ngoko i-pseudonym yaba igama lakhe lokwenene.
"Ngaba uye wacinga ngegama elibi?"
- Azikho iziqhelo zobugcisa. Igama sele lide lide limele lidlale! Emva kokungena kwizikhumbuzo: "Ndiyakhumbula, ndiza kubiza oogogo bavela kwidolophana kwakhona, bathathe ipenki kubo baze bavakalise ikhonsathi. Ndiza kufaka izihlalo ezimbini, zibophe isicangcazo kubo kwaye masicule. Kwaye kwidolophana yabemi abahlala kuyo kwakugqithise igama likaRasputin. Kwaye, mhlawumbi, uGrishka Rasputin ngokwakhe wayevela kuloo ndawo. " Emva koko kwafika kum - Masha Rasputin! Kodwa wayengafuni ukuba nguMasha ixesha elide. Bonke abantombazana baseSiberia, xa beza kunqoba i-capital, iphupha lokuba ngu-Isold, uJuliet, kwaye ngoko uhlobo oluthile lwe-Masha ... Rustic! Ekuqaleni wenza phantsi kwegama likaMarianna Ageyev. Kwintsikelelo yam, yaba mnandi kakhulu. Ndandifuna into yokuqala kwisiRashiya, inamandla, njengezwi layo. Kwaye ke, okwesibini uAlla, emva kwePugacheva, kwinqanaba alinakukwazi! Ngelinye igama, ndamchukumisa ngenyanga. Ekugqibeleni wayeka. U-Masha Rasputin wavela.
Kwinyanga enye kamva, ndalibala ukuba igama lakhe nguAlla. Masha no Masha. Ndikhumbula ukuba uyise wafika. Uthi, "Alla," intombi yakhe. Ndathi kuye: "UNicholas, ungabizi ngokuthi. Akayi kuphendula. "
UAlexei Chumakov, iindaba ezikumaphephandaba
Umlingisi uJessica Alba: I-Biography
U-Ekaterina Volkova - umdlali wechungechunge
Abathandi belizwe lasemzini - bahlala bhedini?
Ukusebenza kwamanye amazwe kumaTyhini
Ikhalenda yeLunar kunye nemiqondiso yezodiac
Impilo yesondo yomntu
Iimfihlelo zokunxibelelana nokuzithemba nokulula
UJoseph Prigogine waphoswa nguValery ngenxa yamangcwaba
Ungayigcina njani iibra, ii-panties, iiglasi
Isaladi kunye nekhohlrabi kunye neengcambu zeparsley
UJulienne kunye ne-shrimps
Iimpawu zonyango ze thyme